Famba seChinoda, Svikira Mishoni
Kupinda pasuo nesuo
Injiniya yekuvaka indasitiri
Iyo purojekiti yekutora maoko kuUnited Kingdom
Icho chirongwa cheChina chiteshi chechitima chinoratidzira
Iyo purojekiti yeBBK inorema kusimudza
Iyo purojekiti yeDDU chikamu chemashangu
Iyo purojekiti yekuremerwa kwekusimudza
Iyo purojekiti yekubata-maoko
Iyo purojekiti yekutakura inorema
Iyo chirongwa chekuremerwa kutakura zvinhu
Iyo purojekiti yekutonhora yapera kusangana isina alloy simbi mapipi ekufambisa
Iyo purojekiti yekusagadzikana uye yakareba mairi kutakura
Iyo purojekiti yekubhururuka ndege
nhau kambaniindasitiri nhau
Sohologistics yakashanda mu 7th Asia International Grocery Transportation Exhibition
International Grocery Transportation Exhibition (Yakapfupikiswa se“Breakbulk Asia”)……
SOHOLOGISTICS pamwe neayo zvigadzirwa, yakakumbirwa kutora chikamu mu8th Asia logistics biennale
Asian Logistics Biennale (transport logistic China), yakaitirwa muShanghai New International Expo Center, inova imwe yezviratidziro zvepasi rose zvekutakura zvinhu……
SOHOLOGISTICS pamwe neayo zvigadzirwa, yakakumbirwa kutora chikamu mu8th Asia logistics biennale 2018-05-20
Pasi pemamiriro ezvinhu ari kuchinja, indasitiri yekuChina yakashandura kubva "kusakwanira kugona" kuenda "kusava nezvinhu zvekutakura"
Nekudzikira zvishoma nezvishoma kwezvirwere zveCOVID-19, kudzoreredza zvinoitika mumagariro uye nehupfumi zviitiko nekukurumidza ……
Yekutanga "China post" inosiya nhasi kuendesa zvinokurumidza zvinodiwa zvigadzirwa nemidziyo kunyika dzeEurope dziri munzira!
Panenge panguva dza11:00 Kubvumbi 27th, China Post Service China-Europe chitima (Yiwu-Madrid) yakasimuka zvishoma nezvishoma kubva kuiyi Yiwu West Railway Station ……
Yekutanga "China post" inosiya nhasi kuendesa zvinokurumidza zvinodiwa zvigadzirwa nemidziyo kunyika dzeEurope dziri munzira! 2020-03-27
Ndeipi incoterm inoshandiswa kune epasi rose mugwagwa mukuru wekufambisa kuenda kuASEAN?
Ndeapi mhando yezvinhu akakodzera kune dzimwe nyika nzira yekufambisa kuenda kuASEAN?
Zvichatora nguva yakareba sei kubva kuLeshan chiteshi, Yibin chiteshi, Luzhou chiteshi kuenda kuShanghai Luojing zviteshi?
Izvo zvinoshanda zvinotora mazuva 8-10. Kana panguva yakaoma yeYangtze rwizi, zvinotora mazuva mashanu kusvika mashanu. , mutsara unodzokera ndiwo mamiriro akafanana.
Chaizvoizvo hongu, kune akakurumbira Leshan chiteshi rinorema zvinhu zviteshi, Yibin chiteshi, uye Luzhou chiteshi mudunhu reSichuan. Sohologistics ichapa yakanakisa hurongwa hweanorema cargos kutakura kwevatengi vedu.
Hongu, kutanga kwezvose, kubva pakuona kwekusimudzira-kwezvakatipoteredza kusimudzira, nyika yakurudzira iyo yepakati-modal uye multimodal yemarori-kune-njanji, njanji-kune-mvura simbi kunwisa mvura kuitira kuti ibatsire mukuchengetedza kwenyika kwezvakatipoteredza, uye chengetedza zvakanyanya mutengo wekutakura zvinhu.
Ndeapi mhando yekarati yakakodzera kune barge yekufambisa?
Kune ma cargos ane anopfuura 5m kana asingatombo pfuura nemabhiriji. Ivo akakodzera kubhaga kutakurwa kuenda mukati memvura mvura kana kununura kubva mukati memvura mvura kuenda kumahombekombe egungwa uye inoshanduka yakanangana nemidziyo yegungwa.